Archive du 20180220
Vola vaovao Ritra sahady ny tahiry ?
Mahatsikaritra ny mpaka vola amin’ireny Guichet Automatique de Banque (GAB) ireny fa dia vola tranainy indray no mivoaka eny tato ho ato.
Antokon’ny fitondrana tany Tolagnaro Notambazana vary iray lovia ny olona
Nampideran’ny Antoko HVM ny vola aman-karena ananany ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2018 tany Tolagnaro ny faran’ny herinandro lasa teo.
Mpanohana ny fitondrana Mirona amin`ny fandotoana ny hafa ny seraserany
Tsy vitsy ny nanambara fa hirotsaka kandidà ho filoham-pirenena amin`izao taom-pifidianana izao ka efa nanentana ny mpikambana ao amin’ny antokony sy ny olom-pirenena. Tsy miafina amin’ny Malagasy rehetra fa anisan`ireo misongadina aloha ny antoko TIM, Mapar ary ny HVM.
Ady amin’ny kolikoly Lesona ho an’i Madagasikara ny nahazo an’i Zuma
Efa mananika ny 700 ny vesatra azo hanenjehan’ny fitsarana ny filoha Afrikanina Tatsimo teo aloha Jacob Zuma, ka nitarika tany amin’ny fametraham-pialany; tafiditra ao anatin’izany ny kolikoly isan-karazany.
Fahapotehan’ny JIRAMA Andry Rajoelina no tompon’antoka voalohany
Anisan’ny nanaitra ny sain’ny maro ny fanambaran’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina tamin’ny fanazavana ilay vinany IEM (Initiative Emergence Madagascar) tamin’ny fahitalavitra maromaro. Niezaka nandresy lahatra ary namoaka tarehimarika maromaro i Andry TGV sady nanao fampitahana an’i Madagasikara tamin’ny firenena hafa.
Antsirabe Bolabolana boaderozy 37 saron’ny zandary
Saron’ny zandary teo amin’ny sakana tao Vinaninkarena-Antsirabe ny sabotsy 17 febroary 2018 lasa teo ny bolabolana boaderozy miisa 37, mirefy 50 ka hatramin’ny 90 sm ny halavany ary 1O ka hatramin’ny 25 sm ny savaivony.
Vato eny Ampamarinana Ahiana mbola hitera-doza
Ny zoma 16 febroary tokony ho tamin’ny 8 ora sy sasany alina no nikodia ilay vato be teny Ampamarinana ka namotika trano 3 sy namono olona 7.
Fivoahana mampiahiahy Nandeha an-tsokosoko any Paris Rajao
Loharanom-baovao iray no nahenoana fa lasa an-tsokosoko any Paris renivohitr’i Frantsa ny faran’ny herinandro teo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Tsy nisy fampitam-baovao ofisialy avy amin’ny seraseran’ny Fiadidian’ny Repoblika fa karazan’ny nafinafenina. Inona no anton-diany ? Misy ifandraisany amin’ny raharaha politika eto ve ?
Varotra “Friperie” Mamelona sy manavotra fianakaviana maro
Anisan’ny asa iray mamelona fianakaviana maro ny varotra friperie eto amintsika. Ny akanjo no tena be mpanao indrindra noho izy ireny misy mividy hatrany.
Kameroney mianatra eto Madagasikara Nanampy ireo voafonja etsy Antanimora
Tsy nanadino ireo voafonja marobe tazonina etsy amin’ny fonjaben’Antanimora ny ASECAM na ny fikambanan’ireo mpianatra teratany Kameroney eto Madagasikara ny faran’ny herinandro teo. Ny fonja misy ireo vehivavy sy ireo zaza tsy ampy taona no notsidihiny ka notolorany kojakoja fampiasa amin’ny fiainana andavanandro,
Kitra- Ligin’Amoron’i Mania Ho lasa seksiona 4 no handrafitra azy
Efa vita tamin’ny 27 janoary teo ny fanokafana ofisialy ny taom-pilalaovana 2018 ho an’ny ligin’ny baolina kitra any Amoron’i Mania tarihan’ny filoha vaovaony, Randriantsoaniaina Nirilanto, ka nisy ny “tournoi firaisankina” notanterahina tao Ambositra renivohitry ny Faritra tamin’izany : Ambositra 1 – 0 Fandriana.
RakotoarimananaTôta Henintsoa “Ndao halamintsika samy Malagasy ny olan’ny FMF’
Hazakazaka rodobe niainga tetsy amin’ny garan’i Soarano ka nifarana teny amin’ny kianjan’i Mahamasina,tamin’ny sabotsy 17 febroary teo, no nanombohan’ny ligin’ny baolina kitra eto Analamanga notarihan’ny filohany RakotoarimananaTôta Henintsoa notronin’olo-manan-kaja maro, ny filohan’ny FMF sy ireo ben’ny tanàna namany ary koa ny orange mpanohana ofisialy sy ireo filohan’ny klioba sy ireo mpilalao marobe, ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2018.
Seksion’ny rugby Vakiniadiana Notohanan’ny fikambanana Fitahina ny lalao Famaranana
Notanterahina tetsy amin’ny kianja Malacam Antanimena tamin’ny alahady 18 feborary teo ireo lalao famaranana sokafy D-2 sy D-1 ny fiadiana ny ho tompondakan’ny seksion’ny rugby ao Vakiniadiana tarihan’ny filohany Rakoniaina José izay nanambara fa izy no tena filoha lany ara-dalàn’ity seksiona ity ary nahazo « attestation de fonction »
Lehilahy matin’ny pesta tany Fandriana Olona maro no efa nifampitakosina taminy
Lehilahy iray 63 taona antsoina hoe Rakotonirina no maty tany Fandriana ny 11 febroary 2018 teo tao amin’ny toby fiantsonan’ny fiara tao Fandriana. Ny fizahana natao azy no nahalalana fa nisy pesta aretin-tratra izy.
Banky Foiben’i Madagasikara Manaraka ny fivoaran’ny teknolojia ara-bola
Nanomboka omaly tetsy amin’ny Carlton ny fivoriana nataon’ny SADC (Southern African Development Community) izay haharitra 5 andro handinihana manokana ny tetikasa napetraka momba ny informatika.
Tanànan’Antananarivo Asiam-panitsiana ny tetibola 2018
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Lapan’ny tanàna Analakely omaly 19 febroary ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany eo anivon’ny Filankevitra Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), amin’izao taona 2018 izao.
Vaky boky Tsy mahaliana ny Malagasy intsony
Azo lazaina ho maro raha mahatratra 10 isa eo isan’andro ireo liana amin’ny famakiam-boky sy mitsidika ireny tranomboky ireny ankehitriny, raha ny fanadihadiana natao teny amin’ireo mpivaro-boky sy tranomboky manodidina an’Ambohijatovo sy Analakely.
Halatra fitaovana informatika 230 tapitrisa ariary nanjavona teny Ampahibe
Lehilahy roa sy vehivavy roa no voasambotry ny polisy avy ao amin`ny SUT Tsaralalana noho ny resaka halatra fitaovana informatika tao amin`ny orinasa tsy minkina lehibe iray eny Ampahibe ny talata 13 febroary lasa teo.
Famonoana mpiasa an-trano any Koweit Filipianina 1700 lasa nody
Namoaka didy hentitra ny fanjakana Filipianina fa tsy azo ataon’ny Filipiana intsony ny manasonia fifanaraham-piaraha-miasa mankany Koweit.Ankoatr’izay dia teratany Filipianina manodidina ny 1700 , izay mpiasa an-trano sy vehivavy ny ankamaroany no nandao avy hatrany an’i Koweit, nentina fiaramanidina manokana ary niverina nody an-tanindrazana.
2/3-n’ny Malagasy Manary zoridira an-kalamanjana
Nikolay nanoloana ny tsy fandraisan’andraikitry ny olom-pirenena eo amin’ny fiainam-pirenena raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Soarano omaly ny manam-pahaizana manokana momban’ny antotan’isa eo anivon’ny ivon-toerana momba izany na ny INSTAT, Jean Baptiste Tarzan Andriamitsara.